Sodana: Mitantara ny fomba mampahonena nisamborana azy ilay mpikatroka an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2018 12:11 GMT
(Marihina fa tamin'ny 27 Martsa 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nosamborina nandritra ny bemidina tao an-tranony ny alin'ny 5 Martsa 2009 ary navotsotra ny 11 martsa ilay mpikatroka an-tserasera Sodaney sady mpisolovava Abdel Hakim Abdel Rahman Nasr.
Voatazona izy ora vitsy monja taorian'ny nanehoany ny fanohanany ny didy fampisamborana ny filohan'i Sodana Omar al-Bashir avy amin'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra an-tserasera Iraisam-pirenena Nubia, izay izy no mpandrindra.
Nanazava ny antsipiriany tamin'ny fomba nisamborana azy tao amin'ny sehatra izay voatokana ho an'ny mpikambana ihany i Nasr ato anatin'ity lahatsoratra mampahonena ity:
Nosamborina aho ny alin'ny 5 Martsa tao anatin'ny fomba iray manakaiky ireny fanafihan-jiolahy any an-tanàndehibe ireny ary mbola tsy afaka ao an-tsain'ilay tanànakely milaminana ny vokatr'izany bemidina izany. Tsy vao voalohany aho no nosamborina, kanefa tsy afaka ao an-tsain'ireo ankizy, sy ireo mpifanolo-bodirindrina aminay ary eny fa na dia ireo ankizy ao amin'ny faritra manodidina aza ny endrik'io fisamborana io. Na ireo olon-dehibe aza dia tsy mahatsapa milamina intsony.
Momba ny fomba nitazonana azy, nanoratra i Nasr hoe:
Habibiana no nampiharina tamiko hatramin'ny nisamborana ahy ny zoma vao maraina be hatramin'ny Asabotsy hariva ary izany no ho tantaraiko amin'ny an-tsipiriany satria mbola miharihary amin'ny vatako ny vokatr'izany. Tsy afaka mandre intsony ny sofiko havanana ary voakasika ny fahitan'ny masoko havanana. Fanina ihany koa aho ny tontolo andro ary tsy afaka nanao ny asako aho noho izany. Niova ny fomba natao tamiko taorian'izany, ary niala tsiny tamiko imbetsaka ny lehiben'ny fiarovam-panjakana ary niova ny fomba nitazonany ahy mandra-pivoahako. Na izany aza, olombelona aho rehefa nifarana ny andro, ary mbola nijaly noho ny fomba nisamborana ahy ary mandry tsy lavo loha ny fianakaviako. Mijaly noho ny nofy ratsy ny zanaky ny rahalahiko ary mihidy mandritra ny andro sy ny alina ny varavaran'ny tranonay ka mijaly ny fianakaviako noho izany. Izaho manokana dia lasa tsy mandre intsony ary tsy afaka nifandray tamin'ny rahalahiko Muzamil aho noho izany izay lasa tsy nandre ihany koa efa an-taonany maro izay.
Nanazava tamin'ny an-tsipiriany ny fomba nataon'ny iray tamin'ireo lehilahy miisa 11 izay nanafika ny tranony rehefa nanaitra azy tamin'ny torimasony i Nasr :
Noheveriko fa ilay zokiko lahy no niditra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahininay (efitra natoriany) , mba haka zavatra ao, saingy gaga aho tamin'ny feo nanaitra ahy. Nesoriko ny bodofotsiko ary nisy jiro nanoloana ahy. Nanontany ny anarako ny iray tamin'izy ireo ary nanohy ny teniny hoe: “Andao miaraka aminay fa aza mitabataba. Araho moramora ny teninay mba tsy hisian'ny olana. Reko nisy tanana avy ao an-damosiko ary nanosika ahy ny vavam-basy roa . Nasaina nandeha aho. Rehefa nanontaniako hoe iza izy ireo dia nilaza tamiko mba hangina ny iray tamin'izy ireo ary nangataka ahy hivoaka ny trano tamin'ny fianihana ny fefy. Nolaviko izany fa nisisika ny hivoaka tamin'ny vavahady aho ary nanaiky izy ireo. Nangataka azy ireo aho mba hampilaza ny fianakaviako, ary nilaza izy ireo fa hanao izany. Kanefa raha vao tafiditra ilay fiara izay efa niandry tany ivelany izahay, dia lasa avy hatrany izy ireo ka tsy nilaza tamin'ny fianakaviako.
Nentin'ireo lehilahy nandalo tanànakely vitsivitsy izy avy eo, niova fiara ary nijanona mba hivavaka. Nampatsiahy i Nasr hoe:
Tonga tao amin'ny tanànakelin'i Samt Andrefana izahay, izay nijanonan'izy ireo mba hivavaka. Afaka namantatra ny endrik'izy ireo aho noho izany. Nanomboka ny fampijaliana taorian'ny vavaka. Toy ny hoe nahazo baiko mba hampijaly ahy nandritra ny Sujiud ( fiankohofana ) izy ireo.